5 Makomborero Ekuwedzera iyo infographic kune Yako Saiti | Martech Zone
Vanhu vanotyairwa nemifananidzo nemavhidhiyo, uye inguva yenguva infographics vakawana rukudzo rwavaifanirwa. Ivo vanopfuura zvinopfuura mufananidzo wakanaka; vane izvo zvinotora kuenda kuhutachiona pamwe nekuvandudza chiziviso cheruzivo, zvemagariro zviratidzo, uye midhiya buzz. Infographics inorongedza yakawanda punch mumufananidzo uye inogona kushandiswa kuenzanisira poindi uye nekuchenesa kusunga chokwadi pamwechete. Izvo zvinonyatsosimudzira kukosha kwavo inyaya yekuti ivo vanogovaniswa zviri nyore pasocial media masaiti, zvichivapa mukana wekuti vapinde muhutachiona.
Chero bhizinesi rinogona kubatsirwa nekushandiswa kweiyo infographics, asi chete kana zvaitwa nemazvo. Sezvakangoita zvemhando yepamusoro zvemukati, infographics zvakare inofanirwa kuve yeiye akanakisa emhando uye anobatsira kune vanoona.
Kutaurirana kuri Nani - Wese munhu ane akasiyana masitaera ekutaurirana, uye vanhu vakati wandei (kunyanya maMillenials) vanofambiswa nemifananidzo. Kutaurirana kuri nani kunowanikwa ne infographics nekuti ruzivo rwacho rwunoiswa mune zvinononoka, nyore kunzwisisa mifananidzo pane blog kana chinyorwa. Izvi zvinokwezva kune vanhu vanoona vadzidzi, vachipa infographics yakawanda kwazvo kukwezva uye kushandiswa.
Yakagadziridzwa Webhusaiti traffic - Sezvo infographic yako ichiburitswa uye ichitanga kuita nzira yayo kuburikidza neyekusimudzira kutenderera, inokwezva kutariswa nevamwe vaparidzi. Kana vamwe vaparidzi vachitaura nezvazvo, iwe uchaona kutumira traffic kubva kune ava vaparidzi. Infographics zvakare inotakura SEO mabhenefiti ayo anobatsira kuwedzera traffic, iyo inokurukurwa pazasi.
Yakagadziriswa Injini Yekutsvagisa - infographics inovandudza yekutsvaga injini masosi kunyanya nekukwezva inbound maLinks. Kana infographic yakakura ikaburitswa, inokwezva zvinongedzo sezvo ichizogoveranwa pamasocial media mapuratifomu uye yakadzamidzirwa mukati mevamwe vaparidzi zvinyorwa. Nekudaro, izvo zvinyorwa zvadzinoburitswa, zvinokwezva zvirevo zvevaverengi uye zvikamu zvemagariro enhau, zvichikonzera magariro iyo inokanganisa zvakanyanya injini dzekutsvaga masosi.
Yakawedzerwa Vateereri Kusvika - Sezvo infographic yako ikabuditswazve uye ichitaurwa mumazuva, mavhiki, nemwedzi zvichitevera kuburitswa kwayo, iwe unokwezva kutariswa kubva kune vateereri vatsva vane yako yakatarwa musika. Izvi hazvingobatsire chete kutyaira yakanangwa traffic kuwebhusaiti yako, zvichikonzera mwero wepamusoro wekushandurwa, asi zvakare kubatsira stock yako enhau midhiya chiteshi neanoshanda anokwanisa emangwana vatengi.
Yakagadziridzwa Brand Kuzivisa & Kuvimbika - Sezvo infographic yako ikadzokororwazve, chiratidzo chako chinosanganisirwa nekusvika kwakapararira kwevaparidzi, kuvaka brand trust kwete chete neako vangangoita vatengi, asiwo neinjini dzekutsvaga (kuwedzera kunatsiridza ako ekutsvainisa injini uye webhusaiti traffic). Midhiya buzz inogadzirwa neako infographic inozo simbisa chiitiko ichi futi. Sevatengi varipo nevatengi vanoona yako infographic yakaburitswa pane anovimbika, ane masimba masayiti avanovimba, iwe unowana yavo kuvimbika uye kuvimba.
Infographics ndeye chishandiso chine simba mune yako internet kushambadzira arsenal. Ive neshuwa yekutarisisa mukugadzira chete yepamusoro-infographics kuitira kuti urege kudzikisira brand yako, uye iwe une mhondi yekushambadzira nzira.
Tags: nhoroondo ye infographicsKushambadzira Infographicskushambadzira kwepamhepo